Iska ilaali - Google Search Console wuu iska indhatirayaa Longtail-kaaga | Martech Zone
Talaado, Janaayo 15, 2013 Talaado, September 24, 2013 Nikhil Raj
Waxaan daahfurnay arrin kale oo gaar ah shalay markii aan dib u eegnay waxqabadka mashiinka raadinta dabiiciga ah ee macaamiisheena. Waan dhoofiyay oo dib u eegay aragtida oo riix xogta Qalabka Raajada Google Search oo waxaan ogaaday inaanay jirin tirro hoose, oo keliya eber iyo xisaab tiro badan.
Xaqiiqdii, haddii aad rumaysan lahayd Google Maamulayaasha shabakada xogta, shuruudaha kaliya ee waawayn ee keenaya taraafikada waxay ahaayeen magaca magaca iyo ereyo aad u tartan badan oo macmiilku kuxiran yahay. Waxaa jira dhibaato, in kastoo. Google Analytics xogta keyword-ka ayaa cadeyneysa cida ka soo horjeedda .. in inta badan taraafikada matoorka raadinta ay ka imanayaan keywords keyword.
Waa inaad akhridaa daabacaadda wanaagsan ee ku jirta Google Search Console Weydiinta weydiimaha mawduuca si loo kashifo waxa socda:
Dareenka: Tirada jeer ee boggaga ka soo muuqday natiijooyinka raadinta, iyo boqolkiiba korodhka / hoos u dhaca celceliska celceliska maalinlaha ah marka la barbar dhigo muddadii hore. Tirada maalmood ee xilli kasta ayaa iska dhigeysa 30, laakiin waad beddeli kartaa wakhti kasta. (Tirooyinkan waa la soo koobi karaa, waxaana laga yaabaa inaysan sax ahayn.)
Xarfoon: Tirada jeer ee isticmaale guji liistada boggaaga natiijooyinka raadinta su'aal gaar ah, iyo boqolkiiba koror / hoos udhac celcelis ahaan qasabno maalinle ah marka la barbar dhigo muddadii hore. (Tirooyinkan waa la soo koobi karaa, waxaana laga yaabaa inaysan sax ahayn.)
Taasi waa sax m Maamulayaasha websaydhku waxay ku soo koobayaan tirinta hoose ee ku saabsan aragtida iyo dhagsiinta, kaliya waxay ku siinayaan tirinta kaliya tirada ugu badan. Tani runti way sii xumeyneysaa iyadoo la oggol yahay xaqiiqda ah in ereyada furaha dheer ay wadi karaan dareenka ugu habboon iyo dhagsiinta! Xaqiiqdii, falanqeyn aan ku sameynay sanad ka hor balooggan, inta badan dhammaan taraafikadayada dabiiciga ahi waxay ka imaanayeen muddada dheer.
Marka, sida ugu badan cunsurrada raadinta dabiiciga ah, iska jir inaad ku tiirsanaato keliya hal il. Waa wax laga xumaado in Google aysan ku soo bandhigi karin xogta dhabta ah Webmasters, waxaan aaminsanahay inay dadka ka caawin doonto inay joojiyaan inay diiradda saaraan ereyada muhiimka ah ee tartamaya isla markaana ay dhisaan xeelado badan oo suuq geyn ah
Tags: qalabka webka ee googlemareegaha googlegwtdhaadheerkeyword keyword
Nikhil Raj wuxuu leeyahay 7 + sano oo khibrad ah SEO iyo Suuqgeynta Dijital ah. Si toos ah ayuu ula shaqeeyay Douglas Karr si loogu maareeyo tiro macaamiil goboleed iyo heer qaran ah iyaga oo wata maareynta raadinta maxalliga ah, heer qaran, iyo mid caalami ah.
Talooyin ku saabsan inaad ka fogaato ciil sumadeed leh Istaraatiijiyadda Emailkaaga
Jan 16, 2013 saacadu markay ahayd 2:15 PM
Farriin weyn, Doug! Akhlaaqda sheekada, ha isku hallayn hal ilood oo run ah si aad u ururiso xogtaada. Xitaa haddii ishaasi ay tahay Google 🙂
Jan 16, 2013 saacadu markay ahayd 3:56 PM
Xaqiiqdii, @ twitter-16113225: disqus!